Wararka ugu dambeeyay qarax ka dhacay Suuqa Beerta iyo ninkii qaraxa ka dambeeyay oo la qabtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararka ugu dambeeyay qarax ka dhacay Suuqa Beerta iyo ninkii qaraxa ka dambeeyay oo la qabtay
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helaayo qarax ka dhacay qeybta lagu iibiyo qudaarta ee ku taalo Suuqa beerta ee degmada Waaberi ayaa sheegaya inuu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo halkaasi ku qarxay.
Wariyaheena ku sugan magaalada Muqdisho oo goordhaw gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa inoo sheegay in xaaladda goobtaasi ay weli kacsan tahay islamarkaana uu indhihiisa ku arkaayay meydad badan ay daadsan jidka laamiga ah.
Sidoo kale, wariyaheena ayaa sheegaya in gaadiidka gurmadka deg dega ay halkaasi soo gaareen islamarkaana ay ka qaadayaan dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi, waxaana la sheegayaa inuu qasaaraha gaarayo ku dhawaad 10 qof oo dhimasho ah iyo 15 qof kale oo dhaawac ah.
Saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo goordhaw la hadlay warbaahinta maxaliga ah ee Muqdisho ayaa sheegay in la qabtay qofkii ka dambeeyay gaariga qarxay, islamarkaana ay ciidanka ammaanka su’aalo weydiinayaan.
Dhinaca kale, qaraxaan ayaa la sheegayaa inuu kusoo beegmay xilli madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sugnaa xarun ku taala meel u dhaw goobta qaraxa ka dhacay, isagoo markaasi wax yar kahor ay mareen kolonyada uu madaxweynaha la socday.
Qaraxaasi oo si weyn looga maqlay magaalada Muqdisho ayaa waxaa xigay rasaas goos-goos ah oo la sheegay inay ridayeen ciidamada ammaanka oo ku sugnaa goob u dhow meesha qaraxa ak dhacay, kuwaas oo la sheegay inay ilaalo ka yihiin jidka laga galo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegayaa inuu maanta ka qeyb galaayay munaasabad dib loogu furaayay iskoolka 21-ka October ee ku yaala wadadda Afisyooni ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ah waddo aad u mashquul badan.
Si kastaba, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waday dadaalo lagu xaqiijinayo amniga magaaladda Muqdisho, halkaas oo lagu wado in maalmaha soo socdo ay ka dhacaan doorashooyinka dalka.